किन चाहिन्छ शरिरलाई फाइबर ? - Aajako Nepali Khabar
Home Others किन चाहिन्छ शरिरलाई फाइबर ?
किन चाहिन्छ शरिरलाई फाइबर ?
Others admin December 31, 20200Comment
काठमाडौ । वनस्पती स्रोतबाट प्राप्त हुने रेसायुक्त पदार्थलाई फाइबर भनिन्छ । अन्नको पुरै भाग (मकै, गहुँ, जौ, फापर, कोदो), गेडागुडी (चना, केराउ, मस्याङ), सागपात, फलफूल आदिमा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । साधारतया फाइबरले पाचनक्रियालाई स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ । यो कार्बोहाइड्रेटको एक प्रकार हो र यो पोलिस्याकराइड अन्तर्गत पर्छ । फाइबरले शक्ति दिँदैन ।
किनकि पाचनक्रिया भइसकेपछि पनि खानामा रहेको फाइबरचाँहि नपचेर दिसाको रुपमा परिणत हुन्छ । दिसामा खस्रो पदार्थ बढी हुने भएकाले आन्द्राको यताउति नअड्की सजिलैसँग बाहिर निस्कन्छ, अर्थात फाइबर भएको खानाले कब्जियत हुनबाट बचाउँछ ।
यदि फाइबर भएको खाद्यवस्तुसँगै चिल्लो र प्रोटिन पनि रहेको छ भने फाइबरले यी पौष्टिक तत्वहरुको पाचनसमेत कम गराउँछ । जब थोरै चिल्लो र प्रोटिनको पाचन हुन्छ तब रगतमा पनि यी तत्वहरुको मात्रा कम हुन्छ । पाचन नभएको बाँकी भाग शरीरबाट काम नलाग्ने पदार्थ अर्थात दिसा पिसाबको रुपमा बाहिर फ्याँकिन्छ ।
यसले रगतमा कोलेस्टेरोल कम गर्न र रगतमा चिनीको मात्रालाई पनि सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ । त्यसकारण मधुमेह भएका व्यक्तिहरुको लागि पानीमा घोलिने फाइबर बढी उपयुक्त हुन्छ । केही खाद्यवस्तुहरु जस्तै स्याउ, केरामा दुवै प्रकारका फाइबर हुनछन् ।